» तपाईको अनलाईन, डोमेन वा वेबसाईट कसको नाममा दर्ता छ ? यसरी चेक गर्नुहोस्
तपाईको अनलाईन, डोमेन वा वेबसाईट कसको नाममा दर्ता छ ? यसरी चेक गर्नुहोस्
३२ श्रावण २०७७, आईतवार २१:५७
मकवानपुर, ३२ साउन । हामी विभिन्न उदेश्यले अनलाईन तथा वेबसाईटहरु संचालन गर्छौँ । कतिपय साथीहरुले न्यूज पोर्टलका रुपमा पनि डोमेन दर्ता गर्नुभएको हुन्छ । तर हामीमध्ये धेरैसँग पेपाल तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा तिर्न मिल्ने डलर रहेको वालेट वा भिसा कार्ड हुँदैन । जसका कारण हामीले त्यस्ता डोमेनहरु वेबसाईट बनाउने डेभलपरहरुसँगै नै किन्नुपर्ने हुन्छ । तर कहिलेकाँही कतिपय डेभलपरहरुले सजिलोको लागि आफ्नै कम्पनीको नाम तथा ठेगाना राखेर डोमेन दर्ता गर्ने गर्छन् ।
यसरी दर्ता गरिएको वेबसाईटमा हामी संचालकहरुको जानकारी नहुने हुँदा प्रेस काउन्सिल तथा सूचना विभागमा दर्ता गर्ने क्रममा हामीलाई धेरै समस्या हुन्छ । किनभने त्यसरी दर्ता गर्न ‘हु ईज हु’ जानकारी मागिन्छ जसमा हाम्रो डोमेनमा हाम्रै नाम हुनु जरुरी छ । त्यसैले तपाईको वेबसाईटको डोमेन तपाईको नाममा छ कि छैन भनेर चेक गर्न यो भिडियो हेर्नुहोस् । यो भिडियो हेरेर तपाई आफैले त्यो जानकारी हेर्नसक्नुहुन्छ । यदि जानकारीमा तपाईको नाम र ठेगानहरु छैन भने कृपया तपाईको वेबसाईट डेभलपरलाई तपाईको नाममा दर्ता गरिदिन आग्रह गर्नुहोस् । हेरौँ भिडियो–